धोनी भर्सेस विराट : को उत्कृष्ट कप्तान? यस्ता छन् दुवैका रेकर्ड
By क्रिकेट पाटी	 On May 30, 2021
काठमाडौं- विराट कोहली ६० टेस्टमा भारतको महेन्द्र सिंह धोनीभन्दा बढी सफल टेस्ट कप्तान हुन् । यद्यपि विराट कोहलीले सीमित ओभर क्रिकेटमा पूर्वभारतीय विकेटकीपर ब्याट्सम्यान धोनीको उपलब्धिहरूसँग मेल खाने समय आएको छ।
भारतीय टीम जून महिनामा युके भ्रमण गर्दैछ । युकेमा भारतले न्यूजिल्याण्डविरुद्ध साउथम्प्टनमा १८ जुनदेखि विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप फाइनल खेल्ने छ। त्यसपछि भारतले इङ्ग्ल्यान्डसँग पाँच खेलको टेस्ट सीरीज खेल्नेछ।
हाल विराट कोहली र एमएस धोनी संयुक्त रूपमा भारतको टेस्ट खेलको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छन्। दुबैले ६० टेस्टमा भारतीय टीमको नेतृत्व गरेका छन्। यद्यपि विराट कोहली टेस्ट कप्तानीमा एमएस धोनीभन्दा धेरै अगाडि छन्। कोहलीको नेतृत्वमा भारतीय टीमले ३६ टेस्ट जितेको छ। धोनीको नेतृत्वमा भारतीय टीमले २७ खेल।
कोहलीले वेस्टइन्डिजमा चार खेल जिताएका थिए। त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाले तीन मध्ये एक खेल जितेको थियो। अस्ट्रेलियामा सात मध्ये दुई खेल जितेको थियो भने इङ्ग्ल्यान्डमा एउटा टेस्ट जितेको थियो। न्युजील्यान्डमा दुबै टेस्ट गुमाएको थियो।
धोनीले न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, इङ्ग्ल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकामा एकएक टेस्टमा भारतलाई जिताएका थिए। धोनीको कप्तानीमा भारतीय टिमले सन २०११/१२ मा इङ्ग्ल्यान्ड र अष्ट्रेलियाबिरुद्धको टेस्ट सीरीजमा ०–४ले गुमाएको थियो।
सीमित ओभर क्रिकेटको कुरामा धोनी उत्कृष्ट कप्तानको रूपमा परिचित छन्। उनले सबै ठूला ट्राफीहरू, ५० ओभरको विश्वकप, टी–२० विश्वकप र भारतीय सीमित ओभर कप्तानको रूपमा च्याम्पियन्स ट्रफी जिताएका छन्। उनले चेन्नई सुपर किंग्सलाई तीन पटक आईपीएलको उपाधि जिताएका थिए।
इङ्ग्ल्यान्डका पूर्वकप्तान वानले भने : धोनी सर्वश्रेष्ठ कप्तान
पूर्व इङ्ग्ल्यान्डका कप्तान माइकल वानलाई सोधेका थिए कि धोनी र कोहलीको कप्तान को हो? उनले धोनीको नाम लिएका थिए। ‘मलाई लाग्छ धोनीको नाम लिन्छु किनकि तिनीहरू विशेष गरी सीमित ओभर क्रिकेटमा सर्वश्रेष्ठ कप्तान हुन्,’ उनले भने।
उनले विराट कोहली एक उत्तम टेस्ट कप्तान भएको बताए। ‘कोहलीले शानदार टेस्ट टीमको नेतृत्व गरिरहेका छन, त्यसैले रातो बल क्रिकेटमा म धोनीलाई प्राथमिकता दिनेछु,’ उनले भने, ‘यदि मैले क्रिकेटको सबै ढाँचामा कप्तान छनौट गर्नुपर्छ भने म धोनीको नाम लिन्छु,’
धोनीले दुई सय खेलका भारतको नेतृत्व गरेका थिए। यी मध्ये एक सय १० खेलमा भारत विजयी भएको थियो भने ७४ खेलमा पराजित भएको थियो।
महेन्द्र सिंह धोनीविराट कोहली